Unyanzvi uye Varaidzo | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Nzira yekudhirowa bird bird? Nzira shoma dzevanoshuva artists
Iyo bird bird cherry yakakura saizi. Dzimwe nguva inosvika pakukwirira kwemamirimita e12. Yakanyanya bird bird inokura pamahombekombe emadziva nenzizi. Inogona zvakare kuwanikwa musango rakanyorova. Maruva ...
Mazurka kutamba: mavambo uye tsananguro
Mazurka kutamba akaonekwa muPoland. Ikoko iye anonzi zvishoma zvakasiyana. Inonzi "Mazur." Uku kutamba kunokurumidza zvikuru uye nesimba. Nyika yokumusha kwake ndeyeMazovia, panogara vanhu vanozviti Masuria ...
Aldanov, Dhivhosi Bhiriji. Pfupiso nezvimiro zveino
Kubva panguva yeHumambo, Russia yaive nemukurumbira wevanyori uye nhetembo. Mabasa asina kupatsanurwa ayo ave eparty kwete chete munyika medu, asi pasirese, anogona nenzira kwayo kudada netsika ...
Yeuka yakakurumbira rock mabhendi 80's
Dombo revakuru rinozivikanwa neidi rekuti mhando nyowani dzinowana kubudirira kukuru, uye maratidziro emakore apfuura anowira kumashure. 80's rock mabhendi akagadzirwa nevadiki chaizvo vaimbi nekuda kwechishuwo chavo chekuzivisa zvakajeka ...
Actress Lyudmila Ivanova: biography, hupenyu hwomunhu
Lyudmila Ivanova mutambi uyo biography yake yakakodzera kuremekedzwa, basa rake rakatanga zvakaoma, asi akakunda zvese uye akawana izvo zvaakange achirwira kubva achiri mudiki. Akazvarwa kuMosco ...
Actor Evgeny Kindinov: biography, hupenyu hwemunhu, mufananidzo
Evgeny Kindinov, ane mufananidzo uri pamberi pako, munguva dzeSoviet akaita kuti vakadzi vazhinji vatambure rudo rusina kufanira kwaari. Mutambi muhudiki hwake aive akanaka kwazvo, asi aingoda ...
Flemish pendi. Technique yeFlemish pendi. Flemish Chikoro chePendi
Classical art, zvakasiyana nemazuva ano avant-garde mafambiro, agara achikunda mwoyo yevaoni. Imwe yeakanyanya kujeka uye akapfuma maitiro anoramba aine chero munhu akasangana nebasa revatambi vechiDutch. Flemish ...
Tchaikovsky akanyora angani masystems? Zvikuru kana zvishoma, asi zvinomwe. Uye ndizvo zvese - ivo vakapenya
Pyotr Ilyich Tchaikovsky muimbi weRussia wezana ramakore re19. Mumhanzi wake unoratidzwa neruvara rwekupenya, romance uye zvinoshamisa melodic hupfumi. Kutenda kuna P.I. Tchaikovsky, mhanzi yeRussia yakasvika pakakwirira zvisati zvamboitika. Panguva imwecheteyo ...
Vatambi vemuvhi "Vanokurumidza uye vakatsamwa 7", kana How bhaisikopo yakapfurwa pasina Paul Walker
Vatambi vemu bhaisikopo "The Fast and the kutsamwa 7" uye vashandi vechirongwa ichi munaNovember 2013 vakashamiswa kuti mutambi anotungamira mune anozivikanwa Franchise Paul Walker akafa asina kupedza basa ...
Mirage Boka: nhoroondo, discography, mufananidzo. Bhendi yekare yekuumbwa
Mune chinyorwa chanhasi, isu tichajairana neiyo yaichimbozivikanwa mukurumbira timu, yakagadzirwa kumashure mumazuva eUSSR uye iyo yaive yakakurumbira mukukura kwehukuru hwedu hweMotherland panguva yePerestroika nguva. Iri ndiro boka reMirage. Biography, ...
Iyo serial firimu "Mwanakomana waBaba veMamwe Marudzi": vatambi uye zano
Pa2013, mushure megore nehafu yekuyedza, kunyora mafirimu uye kugadzirisa, zviyekisheni raive basa rakabatana revatungamiriri veRussia, Belarus neUkraine - firimu "Mwanakomana waBaba veVanhu". Iyi nhevedzano yaive imwe yekuedza kutarisa ...
Moscow, Variety Theatre: poster, matikiti, mapikicha uye kuongorora
Iyi nhanho inofarirwa kwazvo neMoscow. Iyo pop theatre pamusoro pemakore ekuvapo kwayo yakapa vagari uye vashanyi veguta guru nhamba yakakura yemisangano inonakidza. Iyo mitambo yemaatrical mapoka uye nematombo mapoka anoita pane iyo nhanho ...
Lyudmila Zorina: biography uye hupenyu hwega hwevatambi (mufananidzo)
Biography yaLyudmila Zorina inotanga mumakore ehondo isati yasvika. Akazvarwa mwedzi miviri pasati yatanga Hondo Yenyika II, pa1 paMay 1941 muguta rine zita rakanaka reSaratov. Kubva pahudiki, musikana ...
Ndeupi ruvara rwegoridhe ruvara rwakasanganiswa ne: chimiro, mazano uye mazano
Goridhe rinotaridzwa nenzira yakakodzera imwe yesimbi dzinokosha pane imwe nyika. Iyo inoenderera pasi kushoma oxidation, uye iyo svutugadzike ingangove isingagumi. Naizvozvo, hupfumi hwakadaro hunogona kusvika kwedu ...
Ndeapi mabasa akanyorwa naMarshak S. Ya muhupenyu hwake hwese?
Zita reMashak Samuel Yakovlevich rinozivikanwa pasirese. Zera rinopfuura rimwechete rakakura pane basa guru remunyori. Chaizvoizvo, munhu wese anoziva Marshak semunyori wevana, asi Samuel Yakovlevich aive achiri ...
Fazu Aliyeva: biography yeyekupedzisira yeyekupedzisira nhetembo dzezana remakore rechimakumi
Pazuva rekutanga regore idzva re2016, iyo huru Avar neSoviet mhetembo nemunyori ane zita rinoshamisa uye risinganzwisisike revaSlavs, Fazu Aliyev, haana kuzova. Iyo biography yemukadzi akanaka uyu anoshanda ...
Chii chinonzi ngano? Zvinoreva izwi rekuti "ngano"
Kazhinji kangani isu tinonzwa iko zvino kudana mazwi nemataurirwo akadai se "kuberekwa kwenyaya", tisingafungi nezvekuti chii chinonzi ngano. Kana tikatendeukira kunheyo dzekutanga, izwi rekuti leenda rakabva muchiLatin. Saka ...
Nhau isinganzwisisike "Mambokadzi weSpades". Zviri mukati menyaya, iwo mavara makuru
Kunakidzwa uye makaro, chishuvo chekunyepedzera kukwira, mune imwe yakawira swoop kukwira kune zvisingaoneki zviwi - izvi ndizvo zvishuwo zveiye musimboti wenyaya nyaya - injanji weGerman. Gare gare, Dostoevsky anoratidza iyi shungu inopisa kusvika kumadota emurume, kunyanya ...
Strugatsky hama "Mucheche": pfupiso uye matambudziko ebasa
"Mucheche" chinyorwa naAaronady naBoris Strugatsky mune rudzi rwekunyepedzera kwesainzi, rimwe remabasa ekunyora evanyori veSoviet. Yakashandurwa mu1971 mune iyo Aurora. Ipfungwai yaive yakaiswa ...
Hupfungwa hwepfungwa hwaPechorin
"Gamba renguva Yedu" ndiyo yekutanga yedzidziso yepfungwa munyika yedu umo Lermontov anoratidza nyika yake yemukati kune vaverengi nekuongorora zviitiko nepfungwa zveiye anopikisa. Asi kunyangwe izvi, ...
peji 1 peji 2 ... peji 165 Next Page
Mibvunzo ye268 mu database yakagadzirwa mu 1,188 masekondi.